दिनेश गौतम काठमाडौं, २९ पुस
माध्यमिक तहको ११ र १२ कक्षामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदै छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीले नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको हो ।
कक्षा ११ र १२ मा ६ वटा विषय समावेश गरेर पाठ्यक्रम बनाइएको छ । त्यसमा ३ वटा विषय अनिवार्य र ३ वटा विषय ऐच्छिक छन् । विद्यार्थीले पढ्न चाहेमा सातौँ विषय पनि छ । कक्षा ११ मा सामाजिक विषय र कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा थप गरिएको छ ।
नयाँ पाठ्यक्रम पनि पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार डिजाइन गरिएको शिक्षाविद्हरूले बताएका छन् । विश्व सन्दर्भमा विज्ञान प्रविधि र गणित जस्ता विषयमा विद्यार्थीलाई अगाडि बढाउन नसकिने किसिमको पाठ्यक्रम रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘स्टिम’ एजुकेसनसँग जोडिएन
कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउन अहिले पनि राज्य चुकेको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका लागि भनेर नयाँ पाठ्यक्रम आएको छ तर पाठ्यक्रमको क्रम मिलेको छैन ।
भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक, नेपाली विषय १२ सम्म अनिवार्य गर्नुपर्ने हो । पुरानै विज्ञान सङ्काय र मानविकी सङ्कायकै डिजाइनअनुसार अहिले पनि ती विषयका पाठ्यक्रम डिजाइन गरिएको छ ।
कक्षा ११ मा सामाजिक शिक्षा र कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा थप गरिएको छ । सामाजिक शिक्षा चाहिने विषय हो । तर, १२ को जीवनोपयोगी शिक्षा पढाउने तरिका कस्तो हुन्छ ? किताब पढाएर त्यसको के अर्थ ? जीवनोपयोगी शिक्षाको विकल्पमा व्यावयसायिक विषय समावेश गर्न सकिन्थ्यो ।
माध्यमिक तहमा स्टिम एजुकेसन लागू गर्नुपर्ने हो तर साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथम्याटिक्स जस्ता विषय अहिलेको आवश्यकता हो ।
गणित विषय पनि ऐच्छिकमा राखिएको छ । गणित अनिवार्य पढ्नु नपर्ने भनेको स्टिम शिक्षासँग नजोड्नु हो । साइन्स र म्याथमा विद्यार्थीलाई कमजोर बनाएर विद्यार्थीलाई पास गराउने उद्देश्यले पाठ्यक्रम डिजाइन गरिएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम विश्व मञ्चमा विज्ञान प्रविधि र गणितमा विद्यार्थीलाई अगाडि बढाउने खालको छैन । यसबाट फेरि पनि विद्यार्थीलाई अलपत्र बनाउने सम्भावना बढेको छ ।
गणित विषयलाई छायामा पारियो
कृष्णकान्त पराजुली, सहप्राध्यापक (गणित), वाल्मीकि विद्यापिठ
राष्ट्रिय उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने शिक्षाले हो । त्यहीअनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम राज्यले बनाउनुपर्ने हो । तर, नयाँ पाठ्यक्रम व्यावहारिक बनाइएको छैन ।
विश्वव्यापी रूपमा हरेक विषयको खोज अनुसन्धान गणितको माध्यमबाट गरिन्छ । गणितविना कुनै पनि विषयको अनुसन्धान हुँदैन । तर, अहिलेको पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई छायामा पारिएको छ ।
विद्यार्थीलाई सहज र सजिलो तरिकाले पढ्न सुविधा दिने काम राज्यको हो । राज्यले विद्यार्थीलाई पढ्ने वातवरण बनाइदिनुपर्छ । तर, अहिलेको पाठ्यक्रम विद्यार्थीलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यहीअनुसारको बनाइएको छ ।
पढ्ने बेलामा सजिलो खोज्ने होइन, विद्यार्थीलाई मिहिनेत गर्न सिकाउने हो । नयाँनयाँ कुरा थपेर अध्ययन, अनुसन्धानका विषयमा जोड दिइनुपर्ने हो । तर, विद्यार्थीमा ती विषयमा अभिरुचि जगाउनुको सट्टा पाठ्यक्रम काट्ने काम भएको छ । यसले शैक्षिक क्षेत्र सुधार हुन सक्दैन ।
पाठ्यक्रम विशिष्टीकृत गरिनुपर्छ । यसमा दुई मत छैन तर सबै कुराको जानकारी विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भन्ने होइन । एसईईपछि विशेष विषयमा रुचि जगाएर त्यही विषयमा विद्यार्थीलाई पढाउने हो । अहिलेको पाठ्यक्रममा सबै विषय समावेश गर्न खोजिएको छ । भाषाको सम्बन्धमा पनि व्यावहारिक रूपमा पाठ्यक्रम बनाइएको छैन ।
विदेशी दाताको स्वार्थअनुसारको पाठ्यक्रम बनाइएको छ । नयाँ पाठयक्रम विद्यार्थी र समाजको अभिरुचिभन्दा पनि दाताको अभिरुचिअनुसार बनाइएकाले समाज परिवर्तन हुने अवस्था देखिएन ।
बालचन्द्र लुइँटेल, प्राध्यापक, काठमाडौं विश्वविद्यालय
नयाँ पाठ्यक्रमका विषयमा लामो समय छलफल र बहस भयो । स्टिममा आधारित पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हो । पूर्ण रूपमा स्टिम बेसमा पाठ्यक्रम बनाइएको छैन ।
अहिलेको पाठ्यक्रम सन्दर्भसँग जोडिए पनि आईसीटीमा भने पूर्णरुपमा समाहित हुन सकेको छैन । विद्यार्थीलाई सहभागितामूलक सिकाइमा भने अहिलेको पाठ्यक्रमले जोड दिएको छ ।
कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा राखिएको छ । यसलाई स्टिम एजुकेसनसँग जोड्न सकिन्थ्यो तर सययमै छलफल हुन सकेन । यसका कारण कक्षा ११ र १२ को गणितको विषमामा विवाद छ ।
राज्यले चाह्यो भने पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न १० वर्ष कुर्नै पर्दैन । विवादित विषयलाई समाधान गरेर पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सकिन्छ । नयाँ पाठ्यक्रममा केही प्रयत्न भएको छ । पुरानो ढर्राको पनि होइन, नयाँ पनि होइन, बीचको प्रक्रियामुखी पाठ्यक्रम आएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २९, २०७६, १५:२७:००
#बहसमा पाठ्यक्रम #११ र १२ कक्षाको पाठ्यक्रम
कोरोना उपचारमा जम्मा ३ सय १७ डाक्टर र नर्स !
कोरोना जितेकी ७ वर्षीया बालिका भन्छिन् : डाक्टर बनेर सेवा गर्छु
जापानको फुकुओमा नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो उडान